| ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager က - ကျွမ်းကျင်သူ, HD File APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager က - ကျွမ်းကျင်သူ, HD File
ကျွမ်းကျင်သူကို HD File - ဖိုင် Manager က APK ကို
ကျွမ်းကျင်သူ File (ဖိုင်မန်နေဂျာ / Explorer ကို File) တစ်ခုအန္တိမသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်သင်၏ဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် app ကို, တက်ဘလက်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများနဲ့ cloud storage ကိုဖြစ်ပါတယ်။ Android ပေါ်မှာတစ်လူကြိုက်များဖိုင်မန်နေဂျာ / ရှာဖွေသူ!
ဖိုင်မှတ်တမ်းကျွမ်းကျင်သူများအကြားနှင့်ကျွမ်းကျင်သူ, HD File တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်လျှင်ယခင်ဖုန်းဒီဇိုင်းနှင့်အဆုံးစွန်သောတက်ဘလက်များအတွက် optimized ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
★အကူအညီအသုံးပြုသူများသည်လျင်မြန်စွာ & အလွယ်တကူသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်ဖိုင်တွေနေရာချထားရန်
√ကွဲပြားခြားနားသော Pre-defined အမျိုးအစားသို့ဖိုင်တွေစည်းရုံးတဲ့ Expert File ။ သူများသည်အမျိုးအစား app ကို၏ပထမဦးဆုံး tab မှာထားရသည်။ အသုံးပြုသူများသည်ပင်မြန်မြန်ဆန်ဆန် access များအတွက်ဖိုင်တွေအထိမ်းအမှတ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် tags များဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်လည်း app ကိုစတညျဆောကျတဲ့အစွမ်းထက်ဖိုင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရှိသည်။ ကျနော်တို့အများဆုံးကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူများအ၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်လျော့နည်းတစ်မိနစ်ထက်ကိုရှာဖွေသင့်ကြောင်းယုံကြည်!
√ကိုသင်ဘလူးတုသ်, Wi-Fi (Wi-Fi-တိုက်ရိုက်တို့ပါဝင်သည်), NFC ကိုသုံးပြီးဖိုင်တွေပေးပို့လို့ရပါတယ်; သငျသညျ FTP, SFTP နဲ့ FTPS ဆာဗာများဝင်ရောက်ဖို့ဖိုင်မှတ်တမ်းကျွမ်းကျင်သူသုံးနိုငျ; သင်တို့သည်လည်းဖိုင်တွေကိုလက်ခံရန်က်ဘ်သို့မဟုတ် FTP ဆာဗာများသို့သင့်ရဲ့ device ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်မည်; သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးဖိုင်များကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်; သင်တို့သည်ငါတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. ဖိုင်တွေပေးပို့လို့ရပါတယ် GCloud
★တစ်ဦးကစင်ကြယ်သောလွယ်ကူသော-to-သင်ယူ UI ကို interface ကိုတောင်မှတစ်လေ့လာသူအသုံးပြုသူကိုမဆိုစာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရှုတော်မူပြီးမှမပါဘဲရုံတစ်မိနစ်အတွက်အသုံးပြုရန်စတင်နိုင်မည်
√ဖိုင်မှတ်တမ်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖန်တီးမှု tab ကို based interface ကိုရှိပါတယ်။ အားလုံးယှဉ်ပြိုင် apps များဒီ technique ကိုမရှိကြပါဘူး။ တစ်ဦးက Tab ကို based interface ကိုအသုံးပြုသူများသည်လျင်မြန်စွာအလုပ်ဖိုလ်ဒါကိုပြောင်းခွင့်ပြုနဲ့သင်ယူဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်ပါလိမ့်မယ် - ကျွန်တော့် web browser ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကူးနှင့်သင် tabs များ အသုံးပြု. အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသိပါလိမ့်မယ်
●သင့်ပြခန်းမှ Access ကို, ဗီဒီယို, Music, E-Books, စာရွက်စာတမ်းများ, Apps ကပ, Plug-in ကို, APK ကိုဖိုင်များ, ZIP ဖိုင်, အနှစ်သက်ဆုံး
သင့်ရဲ့စတင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏ဖုန်း SD ကဒ်, ပြင်ပ SD ကဒ်နဲ့ဖုန်းတွင်းသိုလှောင်ရန်● Access ကို
manager- Create, Copy ကူး, ဖြတ်, Paste ကဲ့သို့အားလုံးအခြေခံဖိုင်စစ်ဆင်ရေးကိုဖျက်ပစ်ရန်ထောက်ခံပါတယ်●အစွမ်းထက်ဖိုင်မှတ်တမ်း, စီ, Rename, Shortcut ကိုဖန်တီးပါ, Hide, အသေးစိတ်, အနှစ်သက်ဆုံးပေးပို့ပါ။ batch စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပိုပြီး
● Multi-Tab ကိုဖိုင်မှတ်တမ်းမန်နေဂျာတနှင့်တစ်ဦးတည်းသာထောက်ခံမှု tabs များ
● GCloud - အစွမ်းထက် features တွေနှင့်အတူအခမဲ့မိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှု
အသုံးပြုသူ-defined tags များနှင့်အတူ● Tagging- မာကုသင့်ဖိုင်များ
● Recycle Bin ကို
●က Ultra အစာရှောင်ခြင်း & ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖိုင် Downloader ကို
သင့်ရဲ့ PC ကို browser ကနေ● Web ကို PC မှာ Suite- Access ကိုသင့်ရဲ့ device ကို
● Share ကျွန်မရဲ့မာတိကာ, ကွန်ယက် Clients, One Touch ကိုသန့်ရှင်း
●ရှာရန် SD ကဒ်, ရှာရလဒ်များကိုအပေါ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်
● Web ကို PC မှာ Suite- ဟောင်းဗားရှင်းအတွက်သည် HTTP မျှဝေခြင်း Featured ။ တစ်ဦးသည် HTTP Server ကိုစသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုဖွင့်ပါနှင့် Windows စတိုင် interface ကိုအတွက်ကို PC သို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာကြိုးမဲ့ကသွားရောက်ကြည့်ရှု။ သင့်ရဲ့ဖုန်းက install လုပ်ဖို့ APK ဖိုင်အပေါ်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ
● FTP ကိုမျှဝေခြင်း - တစ်ဦးတယောက်က FTP ဆာဗာသို့သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုဖွင့်။ သည်အခြား FTP client ပေါ်တွင်သင်၏ဖိုင်များကိုဝေမျှမယ် & စီမံခန့်ခွဲ
● Wi-Fi ကို Send- တိုက်ရိုက်ဖိုင်မှတ်တမ်းကျွမ်းကျင်သူ powered ဖုန်းများအကြားက Wi-Fi ကိုကနေတဆင့်ဖိုင်များကိုပေးပို့ပါ။
ဖုန်းကို-Samba လိုင်း, FTP client, SFTP လိုင်း, FTP client, ဘလူးတုသ်လိုင်းကနေ● Access ကိုသင့်ရဲ့အိမ်ရှင်ကွန်ပျူတာ
Root Explorer လိုသည့်စနစ်ဖိုင်တွဲတွေနဲ့ဖိုင်တွေမှ● Root access ကို။ ရေးဖတ်ရှုဖို့ Remount / စနစ်။ အမြစ်တွယ်ဖုန်းကိုလိုအပ်သည်။ က paid အင်္ဂါရပ်ရဲ့သတိပြုပါ။
● Cloud သိုလှောင်မှု - အမျိုးမျိုးသောမိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုများကိုဝင်ရောက်ဖို့တစျခုပလီကေးရှင်းကိုသုံးပါ! Google Drive ကို Dropbox, Box.net, SkyDrive ကို SugarSync က, Ubuntu One နှင့်ပိုပြီးပံ့ပိုးကြပါစို့!
●ဘလူးတုသ် - အပြည့်အဝ-featured ဘလူးတုသ်စွမ်းရည်များပါဝင်သည် OBEX FTP, OPP
●မော်ကွန်းတိုက်မန်နေဂျာ - ဖန်တီး. decompress ZIP ဖိုင် archive ကို, decompress RAR နှင့်ပင် encrypt လုပ်ထား RAR ဖိုင်တွေ။ သင်ရုံ folder တစ်ခုအားဝင်ရောက်ကဲ့သို့သင်တို့အ ZIP ဖိုင် / RAR / GZIP / TAR / TGZ / BZ file ကိုကြည့်ရှုတိုက်ရိုက်ထူးခြားတဲ့ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲ decompress နိုင်ပါတယ်
●ခုနှစ်တွင်-built စာသား Editor ကို
●လျင်မြန်စွာ Connect ကိုသင်၏အဆွေခင်ပွန်းရဲ့ဖုန်းမှအကြောင်းအရာများ browse and download ရန်သင့်အားခွင့်ပြုပါတယ်။
V2.3.7 ပြောင်းလဲခြင်း Log in ဝင်ရန်
1.Fix Google Drive ကိုရဲ့ login ပျက်ကွက်
အချို့က Android2+ ကိရိယာများပေါ်တွင် 6.0.Fix ပျက်ကျမှု
3.Fix အသေးစား bug တွေ
V2.3.6 ပြောင်းလဲခြင်း Log in ဝင်ရန်
1 ။ အကောင့် system ကိုပိုကောင်းအောင်
V2.3.5 ပြောင်းလဲခြင်း Log in ဝင်ရန်
1 ။ Multi-ဘာသာစကားထောက်ခံမှုဖြည့်စွက်။
V2.3.4 ပြောင်းလဲခြင်း Log in ဝင်ရန်
1 ။ ပံ့ပိုးမှုက Android 6.0 + ပေါ်တွင်ပြင်ပ SD ကဒ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုဖတ်ပြီးရေး
V2.3.3 ပြောင်းလဲခြင်း Log in ဝင်ရန်
1 ။ 1T နှင့် 5T မှ GCloud ၏သိုလှောင်မှုအာကာသတိုးချဲ့ (အကောင့်လိုအပ်သော upgrade)
2 ။ ကြိုးမဲ့ပုံနှိပ်ခြင်းအင်္ဂါရပ် (15 ကြိမ်အခမဲ့အစမ်း) Add
3 ။ Gcloud ပိုကောင်းအောင်
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager က - ကျွမ်းကျင်သူ, HD File
GMobile Apps ကပ